Accueil > Gazetin'ny nosy > Varo-draikiraiky
Iza no nivarotra ny tranon’i Zafy Albert ?
Naresaka teo anivon’ny fiaraha-monina indray omaly tontolo fa andro vitsy talohan’ny nahafatesan’ny Pr Zafy Albert dia nisy vadin-tany tonga nitondra taratasy nampahafantatra ny Pr Zafy Albert, ka nilaza taminy fa “efa lafo amin’olona ny trano “Villa Elisabeth” eny Ivandry”. Izany hoe karazan’ny taratasy fandroahana azy hiala ao izany.
Ity “Villa Elisabeth” ity moa dia trano natolotra ny fanjakana Malagasy hatramin’ny andron-dRatsiraka hitoeran’ny Pr Zafy Albert mivady, noho izy filohampirenena teo aloha. Manana zo momba izany izy, araka ny didy aman-dalàna manan-kery eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Nomarihin’ny loharanom-baovao fa “navesatra tao an-tsain’ny Pr Zafy Albert koa izany.”
Ny tsy mbola nisy fanampim-panazavana re dia ny hoe “iza no nivarotra an’io trano io ary iza no nividy azy?”
Raha tsiahivina aloha ny tantara dia ny masoivohom-panjakana anglisy tany aloha tany no nitoetra teo. Amin’ny lafiny iray izany dia azo faritana ho tanànan’ny fanjakana anglisy io, raha novidiany fa tsy nofainy. Fa omaly hariva ihany dia efa naresaka tany amin’ny sehatra mihaja na “salon” tany ny anaran’ny minisitra ny Raharaham-bahiny ankehitriny, Rabary Njaka Henry. Izany hoe “mbola misy fifamatorana ara-diplaomatika ve izany izy io, ary noho ny ho fiavian’ny Andriambavy Anne, zanakavavin’ny mpanjan’i Angletera teto ve no nanaovana izany resaka izany mialoha ?”
Fa misy koa ny loharanom-baovao iray izay nahenoana fa “ilay mpanolotsaina manokan’i Mavoloha izay isan’ny malaza fa mpanefoefo sy ny vadin’ny sasany eny an-dapa no nanapa-kevitra fa haka an’io trano natolotra ny fitondram-panjakana ny Pr Zafy Albert io, ka nampiasa ny fahaizany manokana sy nampiharany ny traikefany amin’ny fanodinana fananam-panjakana, dia niteraka izany taratasy nentin’ny vadin-tany izany tany amin’ny Pr Zafy Albert, fony fahavelony”.
Raha izany, nisy ve ny eritreritra ny fanjakana hanome trano hafa ny Pr Zafy Albert fa homena rariny sy fahafaham-po ilay mpanolotsaina manokana sy ny vadin’Ingahirainy ?
Sahala ny Amiraly Ratsiraka mantsy dia ny trano eny Mangarivotra Faravohitra no natokan’ny fitondram-panjakana ho azy, fa rehefa lasa tany Frantsa izy dia nohajariana ho biraon’ny Bianco sy ny Samifin izy io, ka rehefa tafaverina ny Amiraly Ratsiraka dia teny Ambohitrarahaba teny indray no napetraka, saingy tsy nankasitrahany ka notakiany ny hiverenany eny Mangarivotra Faravohitra, dia eny izy amin’izao fotoana.
Ka momba ity trano natolotra hitoeran’ny Pr Zafy eny Ivandry (Villa Elisabeth) ity, manana adidy hitondra fanazavana momba ny feo izay nahoraka ny fitondram-panjakana. Izahay manokana moa dia niezaka nanontany tompon’andraikitra ambony roa tao anivon’ny governemanta, izay vao nesorina tato anatin’ny herin-taona ny iray ary volana vitsy lasa izay ny iray, saingy nitsiky fotsiny izy ireo, toa te hilaza hoe “akory hatao”, fa tsy niteny na inona na inona (obligation de réserve???).
Manara-maso ny tohin’ity raharaha ity ny maro.